देवी काफ्ले | माघ ६, २०७६ सोमबार | 0
विवाह गर्दा दश लाख खर्चेर विवाहपछि फेरि लाख, दुई लाख खर्चेर साउदी, कतार हानिन्छन् । बिवाहको केही महिनापछि श्रीमती घरमा बाआमासँग बस्न कठिन भएको, पढाइलाई अगाडि बढाउनुपर्ने, बच्चा पढाउनुपर्ने आदि समस्या देखाउँदै शहरबजारतिर बसाइँ सर्ने प्रपन्च मिलाउँछन् । उनलाई परिवारको जुठो भाँडो, घरको सरसफाई, खेतबारीको काम गर्न पटक्कै मन लाग्दैन । लागोस् पनि कसरी ? सँगै पढेकी साथी शहरमा बस्छे । मनखुशी डुल्छे, घुम्छे । आखिर मनै त हो । ऊभन्दा म के कम भन्ने भावनाले ग्रस्त भएपछि... ।
यसको अर्को प्रमुख कारणको रूपमा त सामाजिक सञ्जाल नै देखिन्छ । जब मान्छे फुर्सदमा हुन्छ, दिमागमा अनेक कुराहरू खेल्छ । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा कुरा गर्दै जाँदा सम्बन्ध नजिकिन्छ । भेटघाट बाक्लिन्छ र यसबाट भावनात्मक सम्बन्ध बढ्न थाल्छ ।
माथि उल्लिखित यावत कारणले गर्दा आज केही पुरूषहरू पीडित नभएका होइनन् तर यसको पूरा दोषी महिला मात्रै भने अबश्य होइनन् । मान्छे कुनै न कुनै काममा ब्यस्त हुनुपर्छ । ‘खाली दिमाग शैतानका घर’ भन्ने त नेपालमा प्रख्यात उखानै छ । खाली हुनासाथ अनेक तर्कबितर्क गर्न थाल्छ र गलत बाटो अपनाउन थाल्छ ।
देशमा रोजगारीको ब्यवस्था भयो भने परिवार छोडेर बिदेशिनु पर्दैन युवालाई । फलतः घटना न्यूनीकरण हुन्छ । छोराछोरीलाई सानैदेखि जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । संयुक्त परिवारको महत्व बुझाउनु पर्छ । नैतिक शिक्षा सिकाउनु पर्छ । यसले पनि घटना न्यूनिकरण हुन्छ ।
सरकारले पहाडबाट बसाइ सर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहन गर्ने योजना ल्याउनु पर्छ । कृषिमा निर्भर हुने आधार जुटाइदिनु पर्छ । यसो गर्दा युवा परिवारसँगै बस्न सकून् । आफ्नो उत्पादनमा रमाउन सकून् । सपरिवार एकै ठाउँमा भएपछि यस्ता घटना स्वतः घटेर जान्छ । यहाँ हरेक गलत कामको जिम्मा पुरूषलाई नै दिइने भएर पनि हो कि ? कानूनले दिएको अधिकारको दुरुपयोग पनि भएको देखिन्छ । दोषी दुबै पक्ष हुन्छन् ।
#पुरुष हिंसा #महिला हिंसा #वैदेशिक रोजगारी